Chọọ - Nke a ọ bụ keto?
Nke a ọ bụ keto?
Ozi niile na
ị chọrọ maka nri keto
Ihe oriri niile
Ndị na-atọ ụtọ
esiri ya ụzọ
Anụ anaghị eri anụ
Azụ na nri mmiri
Ofe na stew
© 2022 Nke a ọ bụ keto?
Ma ọ bụ chọọ ha site na edemede anyị.
Ị malitela nri keto ma ị maghị ebe ị ga-amalite?
Malite na vidiyo ndị a:
Kedu ihe bụ nri keto ma ọ bụ nri ketogenic?
Ndụmọdụ 9 bụ isi ka ịmalite na nri keto.
Ị nwere ike iji akụkọ anyị gbasaa ọdịnaya nke vidiyo ndị a:
Nri Keto: Ntuziaka kacha mma maka nri Ketogenic Carb dị ala.
Ndụmọdụ Keto 9 dị mkpa maka ndị mbido.
Agbakwụnye akụkọ kacha ọhụrụ
Mkpụrụ osisi Keto: ntuziaka kacha
Ọ bụrụ na ị nọla na nri keto nwa oge, ị nwere ike ghara ịmị mkpụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na site na…
Ihe 5 kpatara Estrogen Dominance na otu esi atụgharị ya
Mgbanwe nke homonụ na-esiri ike ịchọpụta. Mgbaàmà na-adịkarị aghụghọ, dị ka ike ọgwụgwụ ma ọ bụ mgbanwe ọnọdụ, ma na-agbanwekarị site na okirikiri gị…
Kombucha na Keto: Ọ bụ ezi echiche ka ọ ga-ezere ya?
Ka m chee. Ị hụla kombucha na ụlọ ahịa mpaghara gị na enyi gị agaghị akwụsị ikwu banyere ya. Ma eleghị anya, ị nwara ya. Ma ugbu a ị nwere…
Mmanya Keto: Ntuziaka kacha mma maka mmanya mmanya Carb dị ala kacha mma
Otu n'ime ajụjụ kachasị ukwuu ndị mmadụ na-ajụ mgbe ha na-amalite nri obere carb ma ọ bụ nri keto bụ: ị nwere ike…
Keto na gout: nri Keto nwere ike inye aka mgbaama gout?
Ọ bụrụ na ị na-eri anụ, azụ, ma ọ bụ anụ akụkụ ahụ, ị ​​nwere ike ịnọ na-eche: nri keto ndị a na-eme ka ohere ịmepụta gout dịkwuo elu? A sị ka e kwuwe, amamihe...
Unyi na-arụ ọrụ Keto? Kedu ka mgbakwunye a si arụ ọrụ n'ezie?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ maka carbon arụnyere ọrụ. Ekwuru na mgbakwunye a na-enyere aka na nsị, ahụike eriri afọ, ịcha ezé, na ndị ọzọ. Ndị ahụ…
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji banye ketosis?
"Enwebeghị m ketosis?" Ọ bụ ajụjụ a na-ajụkarị n'etiti ndị na-eri nri keto. Oge ịbanye na ketosis dabere na nhazi oge gị…
Ghee Butter (Bọta doro anya): Ezigbo nri dị oke mma ma ọ bụ ngụkọta hoax?
Ghee, nke a makwaara dị ka bọta clarified, abụwo isi ihe na nri India ruo ọtụtụ narị afọ. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ọgwụ…
Agbakwunyere nri kacha ọhụrụ
Ntụziaka Keto Green Smoothie zuru oke
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ịgbaso nri ketogenic pụtara na ụbọchị gị juputara na anụ, cheese, na bọta. Mana nke a enweghị ike ịbụ karịa ...
4 Ngwa nri achịcha ojii dị ala
Ọ ga-amasị gị iri nri nke ukwuu? Echegbula onwe gị, ịnọghị naanị gị. N'ihi na nri ketogenic pụtara iri obere carbohydrates, ọ bụ ...
20 Nkeji Keto Ntụziaka ọkụkọ gbara ojii
A na-ejikarị ntụ ntụ ojii nwere shuga na onye maara ihe ọzọ a na-eji nri ọkụkọ agbaji eme. Ụdị keto a...
Ntụziaka Keto na obere Carb Velvety Pumpkin Pie Ezi ntụziaka
Ka ezumike na-abịaru nso, ha nwere ike ịjụ gị keto dessert ị nwere ike ime iji tinye aka na nnọkọ n'ọdịnihu. Ọ dabara nke ọma, nke a ...
Red Velvet Low Carb, Keto, na Gluten-Free Donuts Ntụziaka maka ụbọchị Valentine
Ọ bụ oge iji ịhụnanya gị mee ihe ọ bụla? Ọ bụrụ na ụbọchị Valentine ma ọ bụ ncheta ma ọ bụ nnukwu emume bịarutere, ị nwere ike ịkwado ụfọdụ ...
18 Ntụziaka nri ụtụtụ Keto na-enweghị akwa
Ị chere na nri ụtụtụ keto na-enweghị akwa ga-ekwe omume? Àkwá bụ isi ihe na nri ketogenic. Na 5 grams nke abụba, 6 grams ...
Ntụziaka kuki ketogenic gingerbread na-enweghị Gluten ekeresimesi
Mgbe oge ezumike na-agagharị, ị gaghị atụfu kuki ekeresimesi ọkacha mmasị gị naanị n'ihi na ị na-eri nri nwere obere carb. ...
Ntụziaka Keto Chicken Tikka Masala n'ime nkeji iri atọ
Chicken tikka masala bụ otu n'ime nri ndị India kacha ewu ewu na West. A na-eji osikapa na achịcha naan nye nri a na-eme omenala na...
Nri agbakwunyere ikpeazụ
Keto bụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ?
Azịza: Arrowroot abụghị keto ma ọlị n'ihi oke carbohydrates ya. A na-esi na osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ a na-akpọ Maranta Arundinacea. Ahụrụ osisi a na mbụ na…
Ọ bụ Keto Tapioca?
Azịza: Tapioca abụghị ihe keto. N'ihi na ọ nwere nnukwu carbohydrate ọdịnaya. N'ịdị elu, ọbụlagodi obere akụkụ nwere ike ịchụpụ gị na ketosis. Ihe…
Ọ bụ Keto La Yuca?
Azịza: Akpu abụghị enyi keto. O di nwute, o nwere otutu carbohydrates. Dị ka ọtụtụ akwụkwọ nri na-eto n'okpuru ala. Ekwesịrị ịzere akpu na keto…
Keto Cornmeal ka ọ bụ ọka?
Azịza: ntụ ọka ọka, nke a makwaara dị ka cornstarch, abụghị keto ma ọ bụ na ọ dị irè dị ka ihe dochie ntụ ọka ọka na nri keto kemgbe…
Ọ bụ aki oyibo keto?
Azịza: N'ime ihe dịka 2,8g nke carbs kwa aki oyibo, aki oyibo bụ mkpụrụ ị nwere ike ịnụ ụtọ na keto na-emebigaghị ya ókè…
Ọ bụ sugar aki oyibo keto?
Azịza: Ọtụtụ ndị na-enyocha sugar aki oyibo ma ọ bụ aki oyibo dị ka shuga ka mma. Mana ọ bụghị ihe keto ebe ọ nwere…
Tagatose sweetener bụ keto?
Azịza: Ee. Tagatose bụ ihe na-atọ ụtọ nke nwere ndepụta glycemic nke 0 nke anaghị ebuli ọkwa shuga dị n'ọbara gị nke na-eme ka keto kwekọọ. Tagatose...
Ọ bụ turmeric keto?
Azịza: Turmeric enwetala ọtụtụ ewu ewu na ụwa keto, na ezi ihe kpatara ya! N'agbanyeghị inwe ụfọdụ carbohydrates, ha na-abịa na…
Ọ bụ mmanụ ahụekere keto?
Azịza: Mba. mmanụ ahụekere abụghị keto ma ọlị. Ọ bụ abụba edoziri nke nwere ike imebi ahụ ike gị nke ukwuu. Mana ihu ọma, enwere ụzọ ndị ọzọ…
Ọ bụ acai keto?
Azịza: Acai bụ ụdị beri nke a na-akụkarị na Brazil. N'agbanyeghị inwe carbohydrates, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile bụ eriri, yabụ ...
Keto ọ bụ ngwakọta kuki Dee dị mma?
Azịza: Good Dee's Cookie Mix nwere ụfọdụ carbohydrates, mana ị nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe ị na-eri nri ketogenic gị ma ọ bụ dịka akụkụ nke ...
Keto Cheesies ọ bụ nri nri chiiz na-egbu egbu?
Azịza: Nri nri chiiz na-ekpo ọkụ bụ keto na enweghị karọb. Yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ha na-enweghị nsogbu ọ bụla na nri ketogenic gị. Ihe…
Ọ bụ Adonis Orange & Turmeric Flavour Crunchy Brazil Nut Bars Keto?
Azịza: Adonis Orange na Turmeric Flavored Crunchy Brazil Nut Bars bụ nnukwu nhọrọ carb dị ala maka ndị na-eri nri keto ...
Adonis aki oyibo na-atọ ụtọ crunchy Pecan Bars Keto?
Azịza: Adonis Coconut Crunchy Pecan Bars nwere naanị 2g nke carbohydrates. Yabụ na obere ọnụ, ị nwere ike itinye ha na nri gị ...
Ọ bụ Adonis Vanillia na-esi ísì ụtọ nke aki oyibo crunchy Bars keto?
Azịza: adonis vanillia flavored crunchy aki oyibo bụ nri net carbohydrate dị ala nke ị nwere ike were na obere ego na nri keto gị.
Ọ bụ Aneto 100% Natural Beef Broth Keto?
Azịza: Aneto 100% Natural Meat Broth bụ efere esichara ketogenic zuru oke. Ofe ọkpụkpụ bụ nri ndị obodo keto hụrụ n'anya n'ezie. Ha na-enye aka...
Kedu ihe bụ "Keto" na gịnị kpatara ya?
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na nri mmadụ na nri nri na Mahadum Complutense nke Madrid na 2014, Enwere m mmasị na isiokwu dị iche iche nke ụdị nri na-abụghị ọkọlọtọ. Ịkpọ ha aha n'ụzọ ọ bụla. Ma mmasị m na nri keto Ọ malitere gburugburu 2016. Dị ka mgbe ị na-amalite na ihe ọ bụla, m nwere oké osimiri nke ajụjụ. N'ihi ya, m ga-aga na-achọ azịza. Ndị a bịara nke nta nke nta ma site n'ịgụ ozi na-aga n'ihu (ọmụmụ sayensị, akwụkwọ ndị ọkachamara, wdg) na site na omume n'onwe ya.
Mgbe oge ụfọdụ na-edebe ya na omume na ụfọdụ pụta ndị yiri ịtụnanya m, M ghọtara na nnọchi nke ụfọdụ nri (karịsịa sweeteners) mere ka m nwee a pụtara elu oriri nke ụfọdụ nwekwara nakwa dị ka a dum ike set ọhụrụ ngwaahịa na. malitere ịpụta maka ndị ahụ malitere iweta obi ụtọ nri keto. Ahịa na-aga ngwa ngwa. Ma ka m na-amụ ihe ndị a dochie anya ma ọ bụ nri ụfọdụ, achọpụtara m na ọ bụghị ihe niile dị ka keto dị ka a na-ekwu, ma ọ bụ na e nwere nchọpụta sayensị nke gosipụtara na ụfọdụ n'ime ha kwesịrị iri ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
N’ihi ya, ekpebiri m ịga na-achịkọta ha ka m jiri aka m mee ihe. Ka nchekwa data m na-etolite, achọpụtara m na ọ bụ ezigbo ozi bara uru maka ọtụtụ mmadụ. Na otú a ka a mụrụ esketoesto.com. Na naanị nzube na ị nwere ezi ozi na-enwe ike soro nri keto n'ụzọ dị mma ma dị irè.
Kedu ihe bụ nri ketogenic?
Nri a sitere na 1920 dị ka ụzọ isi gwọọ ọrịa akwụkwụ nwata, yana n'ihi ihe ịga nke ọma ya dị ịtụnanya: ndị na-eri nri keto nwere ahụmahụ. 30% na 40% ọdịdọ ole na ole, a ka na-eji ya n'ubi a taa.
Ma, gịnị banyere ojiji ya maka ndị ahụ ike bi n'ozuzu ndị na-achọ naanị ifelata ụfọdụ ibu nakwa dị ka na-eduga a ike ndụ? Anyị ga-enyocha nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta nke nta n'ime usoro nri carbohydrate dị ala na abụba dị elu.
Nri keto nwere oke abụba (ihe dị ka 80% nke mkpokọta kalori gị), obere carbohydrates dị ntakịrị (ihe na-erughị 5% nke kalori gị), yana protein na-agafeghị oke (na-abụkarị 15-20% nke calorie gị). Nke a bụ oke nhụsianya siri ike site na nkesa macronutrient nke a na-atụ aro ya: protein 20% ruo 35%, carbohydrates 45% ruo 65% na abụba 10% ruo 35%.
Ihe kachasị mkpa na nri keto bụ usoro nkịtị, nke a na-akpọ ketosis. N'ikpeazụ, anụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na glucose. A na-emepụta glucose mgbe ahụ na-agbaji carbohydrates. Ọ bụ usoro dị mfe, ya mere, ọ bụ ụzọ kachasị mma nke anụ ahụ si emepụta ume.
Mgbe ị na-ebelata carbohydrates ma ọ bụ na ị naghị eri ogologo oge, ahụ na-ele anya na isi iyi ndị ọzọ nke ume iji mejupụta oghere ahụ. Abụba na-abụkarị isi iyi ahụ. Mgbe shuga ọbara na-agbada site na nri carbohydrate dị ala, sel na-ahapụ abụba ma na-ejupụta imeju. Imeju na-atụgharị abụba n'ime ahụ ketone, nke a na-eji dị ka nhọrọ nke abụọ maka ike.
Kedu uru nri Keto nwere ike ime?
Nri keto nwere ike ọ gaghị adị mfe, mana nyocha sayensị na-egosi na ọ nwere uru karịa iji ya na ọgwụgwọ Akwụkwụ na-adọ, dịka nri keto yiri ka ọ na-ejikọta ya na nkwalite ọgwụgwọ nke:
Ọrịa Alzheimer: Sayensị na-atụ aro na ndị ọrịa Alzheimer na-agbaso nri ketogenic nwere mmụba dị ukwuu na ọrụ ọgụgụ isi. Ekwenyere na nke a nwere ihe jikọrọ ya na imeziwanye ọrụ mitochondrial site n'inye ụbụrụ mmanụ ọhụrụ.
Ọrịa Parkinson: Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke ọrịa Parkinson bụ nchịkọta na-adịghị mma nke protein a maara dị ka alfa-synuclein. Nnyocha nke Michael J. Fox Foundation kwadoro achọpụtala ma nri ketogenic na-akpali nbibi nke protein ndị a, na-ebelata ọnụọgụ alpha-synuclein na ụbụrụ.
Ọtụtụ sclerosis: na obere ọmụmụ site na 2016, ndị ọrịa multiple sclerosis (MS) nọ na-eri nri keto. Mgbe ọnwa isii gachara, ha kọrọ akụkọ ka mma nke ndụ, yana mmụba na ahụike anụ ahụ na nke uche. Ma n'ezie, tupu ndị dọkịta na ndị nchọpụta enwee ike ịchọta njikọ dị n'etiti keto na multiple sclerosis, a na-achọ ihe nlele buru ibu na nyocha ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, nsonaazụ mmalite na-atọ ụtọ.
Pịnye ụdị ọrịa shuga abụọ: Maka ụdị ọrịa a, n'ezie, ibelata carbohydrates na nkwupụta kacha nta bụ ụkpụrụ. Nke mere ka ọ bụrụ ihe ngosi na-adọrọ mmasị nke ukwuu nke mmetụta ogologo oge nke ịrapara na nri keto. Ọ bụ ezie na a na-eme nyocha ruo taa na obere ihe nlele, ihe akaebe na-egosi na nri nwere obere carbohydrate (dị ka nri keto) nwere ike inye aka belata A1C ma melite mmetụta insulin ruo 75%. N'ezie, ngbanwe nke 2017 chọpụtara na nri keto jikọtara ya na njikwa glucose ka mma yana mbelata ojiji ọgwụ. Nke ahụ kwuru, ndị edemede ahụ dọrọ aka ná ntị na amabeghị ma nsonaazụ ya bụ n'ihi oke ibu, ma ọ bụ na ọkwa ketone dị elu.
Ọrịa cancer: Nnyocha nnwale nke mbụ na-egosi na nri keto nwere ike inwe mmetụta antitumor, ikekwe n'ihi na ọ na-ebelata mkpokọta kalori oriri (na ikesa glucose) maka uto tumor. Na a 2014 ntụgharị Site na nyocha anụmanụ, a chọpụtara na nri ketogenic na-arụ ọrụ nke ọma iji belata etuto ibu, ọrịa cancer colon, ọrịa kansa afọ y ọrịa kansa ụbụrụ. Achọkwuru nyocha mmadụ site na iji nlele buru ibu, mana ọ bụ n'ezie mmalite mmalite dị mma.
Ụdị nri keto
Dị ka a tụlere na mbụ, enwere ọdịiche dị na oke abụba, protein, na carbohydrate oriri na nri keto. Nke a na-ebute ụdị nri keto dị iche iche ma ọ bụ ụzọ dị iche iche isi merie ya. N'ime ha anyị na-ahụkarị:
Nri nri keto ọkọlọtọ (DCE): Nke a bụ ihe atụ kachasị nke nri keto ma dabere na oke abụba dị oke, oriri protein na-agafeghị oke. Ọ na-enwekarị: 75% abụba, protein 20% na carbohydrates 5%.
Nri keto protein dị elu: Yiri nri ọkọlọtọ, mana gụnyere protein karịa. 60% abụba, protein 35% na carbohydrates 5%.
The cyclical keto diet (DCC): Nke a bụ atụmatụ nke gụnyere oge nwere oke oriri nke carbohydrates, dịka ọmụmaatụ, na-ekewa izu n'ime ụbọchị keto 5 na-esochi yana nke fọdụrụ na 2 nwere carbohydrates.
Nri ketogenic emegharị emegharị (DCA): Na-enye gị ohere ịgbakwunye carbohydrates n'ụbọchị ị na-aga ọzụzụ.
Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ọ bụ naanị keto ọkọlọtọ na nri protein dị elu nwere ọtụtụ ọmụmụ. Ya mere, a na-ewere ụdị cyclical na ndị a na-emegharị emegharị na-ewere usoro dị elu ma na-eji ndị na-eme egwuregwu eme ihe karịa.
N'isiokwu a na na webụ n'ozuzu, iji kwado mmegharị, m na-arụ ọrụ na DCE (ọkọlọtọ keto diet).
Enwere m ike felata ibu ngwa ngwa na nri keto?
Abụ m nwata mara abụba. N'ezie n'oge uto, ị na-ebelata ibu mgbe ị na-agbatị, ha gwara m. Nsonaazụ? Abụ m onye afọ iri na ụma mara abụba. Nke a metụtara ọtụtụ akụkụ nke ndụ m. Amalitere m ibu ibu n’onwe m mgbe m dị afọ iri na asaa. Nke a mere ka m mụọ gbasara nri mmadụ na nri nri. Laa azụ n'afọ nke abụọ nke ogo mmụta, abụrụla m onye nwere ahụ nkịtị na ahụike. Nke a nwekwara mmetụta dị mma na ndụ m n'ọkwa nkeonwe na nke ọkachamara. Onye ga-ekwere onye na-eri nri abụba?
Ya mere azịza ya bụ ee. Ọ bụrụ na ị nwere ike felata na nri keto. Anaghị m ekwu maka ihe ọ bụla dị oke egwu ma ọ bụ nzuzu ọ bụla. Nnyocha na-egosi na ị na-atụfu ibu na ihe ndị ọzọ, ị na-efunahụ ngwa ngwa karịa na nri ọkọlọtọ nwere ọkwa dị elu ma ọ bụ "nkịtị"Nke carbohydrates abanyelarị, ma na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa ụfọdụ.
Ihe ọzọ bụ na ị na-atụfu ibu na-enweghị iji ụbọchị niile na-agụta calorie ma ọ bụ na-edekọ ọnụ ọgụgụ ị na-eri n'ụzọ na-agwụ ike.
Nnyocha na-egosi na ndị na-agbaso nri keto na-atụfu ihe dịka 2.2 ruo 3 ugboro karịa ndị na-egbutu calorie na abụba. Ma n'agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe dị iche, triglycerides na HDL cholesterol na-egosikwa mmụba.
Na mgbakwunye, nri keto, nyere mmụba ya na oriri protein yana mbelata nke shuga, na-enye uru ndị ọzọ (karịa oke ibu) dị ka mmụba insulin.
Kedu nri m kwesịrị izere?
N'ezie, ndị nwere oke carbohydrate dị elu. Ọmụmaatụ:
Nri na ihe ọ drinkụ drinkụ dị nro nwere nnukwu shuga: ihe ọ drinkụ drinkụ dị nro, ihe ọ juiceụ ,ụ, smoothies, sweets, ice cream, wdg.
Mkpụrụ ọka, ọtụtụ ntụ ọka na ihe mpụta: pasta, osikapa, ọka, wdg.
Mkpụrụ: Mkpụrụ niile ma e wezụga ọtụtụ tomato, dị ka strawberries, blakberị, guava, piom, raspberries, Wdg
Agwa ma ọ bụ mkpo: agwa, lentil, chickpeas, peas, wdg.
Mgbọrọgwụ na akwụkwọ nri tuber: poteto dị ụtọ, karọt, poteto, wdg.
Nri ma ọ bụ ngwaahịa dị obere abụba: Kpachara anya na ha. Ha na-abụkarị ultra-esichara ma nwee nnukwu carbohydrates.
Condiments ma ọ bụ sauces: Ị ga-ejikwa ugegbe na-ebuli elu na-ele ha anya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha nwere oke shuga dị elu na abụba juru eju.
Abụba juru eju: Ọ bụ ezie na nri keto dabere na oriri nke abụba, ọ dị mkpa ịgbachita abụba juru eju na mmanụ a nụchara anụcha, ma ọ bụ Mayonezi.
Mmanya: Ọdịnaya shuga dị n'ime ya dị nnọọ elu. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikpochapụ ya kpamkpam na nri keto.
Nri nri na-enweghị shuga: Ebe a kwa, ị ga-akpachara anya. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ụtọ niile dabara adaba maka nri keto. Ya mere ebe a enyochala m ihe ụtọ ndị a na-ahụkarị. Na-enye gị ohere ịmata ndị ị nwere ike iri na-ahapụghị nri.
Kedu nri ị nwere ike iri na nri Keto?
Ihe mejupụtara nri keto bụ:
Anụ: Red, steaks, Serrano ham, anụ ezi, toki, ọkụkọ, anụ hamburger, wdg.
Azụ nwere abụba: salmon, tuna, trout, mackerel, wdg.
Chiiz: A naghị edozi ya nke ọma dị ka cheddar, mozzarella, cheese cheese, blue.
Akụ na ụdị mkpụrụ osisi: almọnd, walnuts nke ụdị ọ bụla, mkpụrụ ugu, mkpụrụ chia, wdg.
Mmanụ a na-edozighị: olive na-amaghị nwoke, aki oyibo na mmanụ ube oyibo.
Ube oyibo: Ma dum ma ọ bụ guacamole mere n'onwe gị. Ọ bụrụ na ịzụrụ ya, ị ga-elele na o nweghị ihe agbakwunyere.
Akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enwekarị carbohydrates dị ala yana tomato, eyịm na ose, wdg.
Nri a na-ahụkarị: nnu, ose, herbs, wdg.
Iri nri na-enweghị ịwụpụ nri keto
N'adịghị ka ụdị nri ndị ọzọ, na nri keto, nri n'èzí ụlọ adịghị mgbagwoju anya. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ niile ị nwere ike ịnụ ụtọ nhọrọ enyi keto kpamkpam dịka anụ na azụ. Ị nwere ike ịtụ ezigbo ribeye ma ọ bụ azụ nwere oke abụba dị ka salmon. Ọ bụrụ na anụ ahụ na-esonyere poteto, ị nwere ike ịrịọ ka e dochie ha na obere akwụkwọ nri na-enweghị nsogbu.
Nri na akwa bụkwa ezigbo ngwọta dị ka omelet ma ọ bụ àkwá nwere anụ ezi.
Nri ọzọ dị mfe ga-abụ hamburgers. Naanị ị ga-ewepụ achịcha ahụ ma ị nwere ike imeziwanye ya site n'ịgbakwunye dị ka ube oyibo, cheese anụ ezi na akwa.
N'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị ka Mexico ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla. Ị nwere ike ịtụ anụ ọ bụla ma tinye ezigbo cheese, guacamole, na salsa ma ọ bụ ude ude.
Banyere ihe ọ ga-adị ka gị na ụfọdụ ndị ọrụ ibe gị ṅụọ mmanya n'ụlọ mmanya, ị gaghị enwekwa nsogbu. A koko-cola 0ma ọ bụ Nri Coke yana soda ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nestea na-enweghị shuga bụ keto kpamkpam. Ị nwekwara ike ịṅụ kọfị n'enweghị nsogbu.
Na ihe a niile, ị nwere ike ịhụ na ihe ndị a na-emepụta adịghị egwu dị ka nri ndị ọzọ. Ị gaghị enwe obi amamikpe mgbe ị na-eri nri ebe ọ bụ na ọ nwere nchekwa zuru oke, ị nwere ike ịchọta nhọrọ na-atọ ụtọ na nri keto gị.
Mmetụta dị na nri keto na ihe ị ga-eme iji belata ha
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ nri, ị nwere ike inwe mmetụta ụfọdụ n'isi mmalite mgbe ịmalitere nri keto. Nke a bụ ihe nkịtị. Ahụ gị na-eji arụ ọrụ n'otu ụzọ ma ị na-agbanwe ya. Ị gaghị atụ egwu. Nri keto dị mma maka ndị nwere ahụike zuru oke.
Ụfọdụ na-akpọ mmetụta ndị a: keto flu.
Ihe a na-akpọ flu keto na-ebutekarị mbelata ike ike, mmetụta nke iche echiche na-edochaghị anya, ụba agụụ, mgbakasị ahụ na mbelata arụmọrụ na egwuregwu. Ka i si hụ, Ọrịa keto adịghị iche na mmetụta ị na-enwe mgbe ịmalitere nri ọ bụla. Mmetụta ndị a na-adịru ụbọchị ole na ole ma mechaa pụọ.
Iji belata mmetụta ndị a, echiche na-adọrọ mmasị bụ ịnọgide na-eri nri kwesịrị ekwesị maka izu mbụ mana ibelata olu nke carbohydrates nke ukwuu. N'ụzọ dị otú a, ahụ gị nwere ike nke nta nke nta na-emegharị ka abụba na-ere ọkụ tupu ịhapụ kpamkpam carbohydrate oriri.
Nri keto na-agbanwekwa mmiri na mineral dị na ahụ gị nke ukwuu. Ya mere, ị nwere ike itinye nnu ọzọ na nri gị ma ọ bụ were mgbakwunye ịnweta ịnweta ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nri nke 3.000 ruo 4.000 mg nke sodium, 1.000 mg nke potassium na 300 mg nke magnesium kwa ụbọchị na-ebelata mmetụta dị ukwuu n'oge oge mmegharị ahụ.
Ọ dị mkpa, karịsịa na mmalite, na ị na-eri nri ruo mgbe ị na-enwe mmetụta zuru oke. Enweghị mmachi kalori. Nri keto na-akpata mbelata ibu na-enweghị njikwa kalori ma ọ bụ mmachi. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchịkwa ha ka ha nwee mmetụta ngwa ngwa, ọ dịkarịa ala gbalịa ka ị ghara ịgụ agụụ na mbụ. Nke ahụ ga-enyere gị aka idowe ya nke ọma.
Nri ketogenic ọ bụ ezi echiche nye m?
Dị ka ọ dị na nri niile, enwere ndị mmadụ nri keto agaghị adabara. Nri ketogenic dị ezigbo mma maka ndị nwere oke ibu, ndị na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ ndị chọrọ imeziwanye ahụike metabolic ha na n'ozuzu.. Mana ọ naghị adabara ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-achọ inweta ọtụtụ uru ahụ ma ọ bụ ibu.
E wezụga nke ahụ, dị ka nri ọ bụla, ọ ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ya kpọrọ ihe ma na-agbanwe agbanwe. Na nsonaazụ ga-abụ ọkara - ogologo oge. Ịga na nri bụ agbụrụ dị anya. Ị ga-adị mfe. Chee na n'ezie, ị nọla n'ịdị arọ gị nke ọma ogologo oge. Ọ baghị uru (ma ọ naghị adịkwa mma) ịchọrọ ịlafu ihe ndị ahụ niile n'ime ụbọchị iri na ise.
N'agbanyeghị nke ahụ, na ozugbo echerela ihe niile dị n'elu, ihe ole na ole ka egosipụtara na nri dị mma dị ka ịdị irè ma a bịa n'ịlalata ibu na uru ahụike na-abịa na nri keto.
A na m akwado nri a kemgbe ọtụtụ afọ. Na dị ka ihe niile, e nwere ụfọdụ juru ebe nile obi abụọ ma na mmalite na n'oge mmepe na m na-aga na-agbalị ikpochapụ elu.
Anụ ahụ a ga-efunahụ m?
Dị ka ọ dị na nri niile, mbelata nke anụ ahụ ga-ekwe omume. Mana enyere na ọnụọgụ protein dị ukwuu karịa na nri nkịtị, yana na enwere ọkwa ketone dị elu, mfu a nwere ike ịdị ntakịrị ma ọ gaghị adị oke mkpa na-eme ụfọdụ ibu.
Enwere m ike ịrụ ọrụ akwara m na nri keto?
Ee, mana ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịnweta olu, nri keto adịghị arụ ọrụ maka nke a karịa nri carbohydrate na-agafeghị oke.
Enwere m ike iri carbohydrates ọzọ?
N'ezie. Mana ọ dị oke mkpa ka ị belata carbohydrates nke ukwuu. Ọ bụ n'ezie ndabere nke nri na ị kwesịrị ị na-enwe opekempe oriri nke ha dịkarịa ala mbụ 2 ma ọ bụ 3 ọnwa. Mgbe oge ahụ gachara, ị nwere ike iri carbohydrates n'oge pụrụ iche, mana ozugbo emechara ị ga-alaghachi na ọkwa kacha nta.
Ego ole ka protein m nwere ike iri?
Ekwesịrị iri protein n'ime oke oke. Nri dị elu nwere ike ime ka insulin na-ebelata ma belata ketones. Oke kacha akwadoro bụ 35% nke mkpokọta kalori.
M na-enwekarị ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ
N'ezie, ị na-eri nri n'ụzọ na-ezighi ezi ma ọ bụ ikekwe ahụ gị anaghị eji abụba na ketone eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Wedata oriri carbohydrate gị wee gaa n'ihu na ndụmọdụ m nyere na mbụ. Ị nwekwara ike were mgbakwunye TMC ma ọ bụ ketones iji nyere ahụ gị aka.
Ọ bụ eziokwu na ketosis dị oke egwu?
Ọbụghị ncha ncha. Enwere ndị mmadụ na-agbagha echiche nke ketosis na echiche nke ketoacidosis. Ketosis bụ usoro ebumpụta ụwa n'ime ahụ, ebe ketoacidosis na-apụta n'ọnọdụ ọrịa shuga a na-achịkwaghị achịkwa.
Ketoacidosis dị ize ndụ, mana ketosis nke na-eme n'oge nri ketogenic bụ ihe nkịtị na ahụike zuru oke.
Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na enwere m mgbari mgbaze na / ma ọ bụ afọ ntachi?
Mmetụta akụkụ a nwere ike ịpụta mgbe izu atọ ma ọ bụ anọ gachara. Ọ bụrụ na ọ dịgidere, gbaa mbọ rie anụ anaghị eri anụ. Ị nwekwara ike iji ihe mgbakwunye magnesium na-ebelata afọ ntachi.
Mmamiri m nwere isi mkpụrụ osisi
Echegbula. Nke a bụ naanị n'ihi nkwụsị nke ngwaahịa emepụtara n'oge ketosis.
Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na m na-esi ísì ọjọọ?
Gbalịa ịṅụ ọtụtụ mmiri ụtọ mkpụrụ osisi ma ọ bụ ta chịngọm na-enweghị shuga.
Ọ dị m mkpa imeju carbohydrates site n'oge ruo n'oge?
Ọ dịghị mkpa, ma ọ nwere ike ịba uru iji calorie ka ukwuu na-ejikọta ụbọchị ụfọdụ karịa ka ọ dị na mbụ.
Ntụziaka Keto Dessert kacha ọhụrụ
Ntụziaka kuki Keto Halloween Frosted
Otu esi emepụta nri Keto Macro Meal Planner
Ntụziaka Keto kacha ọhụrụ
Ketogenic, Carb dị ala, Sugar Free na Ntụziaka kuki “Sugar” na-enweghị Gluten
Achịcha kuki Keto na ude chọkọletị jupụtara ntụ ntụ ntụ ntụ
Keto creamy lemon bars uzommeputa
Ntụziaka keto na shuga n'efu batter ice cream
Ntụziaka kuki keto achicha mgwakota agwa
Ntụziaka dị mfe Keto Squash Bars
Akwụkwọ ọkwa gbasara iwu yana amụma nzuzo
© Copyright 2022 Nke a ọ bụ keto? Ikike niile echekwara.
Onye nwe portal a, esketoesto.com, na-ekere òkè na Mmemme Mgbakwunye Amazon EU, wee na-abanye site na ịzụrụ ihe jikọrọ ya. Ya bụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ihe ọ bụla na Amazon site na njikọ anyị, ọ naghị efu gị ihe ọ bụla ma Amazon ga-enye anyị ọrụ ga-enyere anyị aka itinye ego na weebụ. Njikọ ịzụrụ ihe niile gụnyere na webụsaịtị a, nke na-eji / ịzụrụ/akụkụ, bụ nke a kara aka maka webụsaịtị Amazon.com. The Amazon logo na ika bụ ihe onwunwe nke Amazon na ndị mmekọ ya.